Weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay saldhiga ciidamada Jabuuti ee Beledweyne – STAR FM SOMALIA
Weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay saldhiga ciidamada Jabuuti ee Beledweyne
Weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa lagu weeraray saldhig ciidamada Jabuuti ku leeyihiin magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Wararka aan ka heleyno magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa mid xoogan oo laga maqlay xaafadaha magaalada.
Saldhiga ciidamada Jabuuti ee ku yaala xaafada Howlwadaag ayaa laga maqlayaa rasaas ay ridayaan ciidamada Jabuuti ay ridayaan taasi oo baqdin kale ku abuurtay shacabka magaalada.
Lama ogaan karo khasaaraha weerarkaasi ka dhashay, balse waxaa dadka ku sugan magaalada ay sheegayaan iney jiraan waxyeelo soo gaartay shacabka iyo gurmo qaraxa xoogiisa ku burburay.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in burbur xoogan ay soo gaareen dhamaan dhismayaashii ku yaalay agagaarka saldhiga ciidamada Jabuuti ee qaraxa lala eegtay.
Ciidamada Jabuuti ayaa joojiyay dhaqdhaqaaqii magaalada Beledweyne waxaana adag in dadka ay isaga kala gudbaan xaafadaha ku yaala goobta qaraxa uu ka dhacay.
Qeybtii labaad ee Ciidanka Amisom oo la geeyay Cadaado
Khasaaraha ka dhashay weerarkii ka dhacay Mandheera oo sii kordhay (SAWIRO)